Qasab Mise Qorsho Kale; Golaha Wasiirrada Iyo Qudbooyinkoodii Qadadii Kheyrre? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Qasab Mise Qorsho Kale; Golaha Wasiirrada Iyo Qudbooyinkoodii Qadadii Kheyrre?
Qasab Mise Qorsho Kale; Golaha Wasiirrada Iyo Qudbooyinkoodii Qadadii Kheyrre?
Qaar kamid ah xildhibaannada ka tirsan golaha wasiirrada ayaa kasoo muuqday kulan qado sharaf ah oo xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya laga soo abaabulay, islamarkaana laga doonayay dhoola tus lagu baqo gelinayo guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Max’ed Sheekh Cismaan Jawaari.
Qaar kamid ah wasiirrada ayaa la siiyay fursad ay kaga hadlaan qadada, ha yeeshee qaarkood ayaa laga dareemayay in lagu soo qasbay, maaddaama ay ka baxeen mowdduucii qadada oo ahayd in laga codsado guddoomiye Jawaari in uu is casilo.
Tusaalle Wasiirada Mooshinka ka hadalkiisa aanan ku qanacsaneyn waxa ka mid ah Wasiirka Maaliyadda Bayle oo qudbad halkaasi uu ka jeediiyay kaga hadlay arrimaha Maaliyadda, Akoono in loo furo Ciidamada Booliska iyo bixinta Canshuurta, taas oo ahayd mowdduuc aan meesha oollin, taas oo muujineysa in ay wasiirrada qaar ay ku qasbanaayeen arrintaas.
Xukuumadda Kheyrre ayaan ka baranay in ay qasabto cid kasta oo ay dan ka leedahay, ha yeeshee golaha wasiirrada ayaa ku wareersan siyaasadda is diiddan ee golaha fulinta iyo midda sharci dejinta.